Sanlúcar de Barrameda တွင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲ ခရီးသွားသတင်း
Sanlúcar de Barrameda မှာဘာကြည့်ရမလဲ
Lola curiel | | Espana, ယေဘုယျ, ကမ်းခြေ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Doñanaအမျိုးသားဥယျာဉ်ရှေ့တွင်တည်ရှိပြီးSanlúcar de Barrameda, ၎င်းသည်ကာဒစ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အလည်ပတ်ဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမိုင်းမတိုင်မီကကတည်းကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားကြောင့် Tartessos ကနေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စပိန်တွင်အရေးအကြီးဆုံးသောမက်ဒီနာဆစ်ဒိုးနီးယား၏မြင့်မြတ်သောအိမ်၏တည်ထောင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ အမေရိက၏ကိုလိုနီကာလအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏။ ဒီနေ့ ၎င်း၏လမ်းများသည်ထိုရာစုနှစ်များစွာသမိုင်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်.
Sanlúcar de Barrameda ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်သဘာ ၀ ကြွယ်ဝမှုကအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအစာစားရန်ကမ်းခြေများ၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ညဥ့်ဘဝနှင့်အရက်ဆိုင်များတွင်သင်ပျင်းရိငြီးငွေ့စေရန်လိုအပ်သောအရာများအားလုံးရှိသည်။ Sanlúcar de Barrameda တွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရှုရမည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါက၎င်းစာမူကိုသင်တွေ့ရှိမည့်နေရာကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ။ ဒီရတနာသို့သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးသွား interest ည့်စိတ်ဝင်စားမှုနေရာများနှင့်စာရင်းပြုစုပါ Cádiz.
1 Barrio Alto သို့သွားရောက်ပါ
1.2 La Merced ၏ခနျး
1.3 ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သမ္မတကတော်၏ Basilica
1.4 Rota ဂိတ်
1.6 မက်ဒီနာ Sidonia နန်းတော်
1.7 Orleans-Bourbon နန်းတော်
2 Sanlúcar de Barrameda ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ
2.1 Bonanza သဲသောင်ပြင်
2.2 La Calzada နှင့် Las Piletas ကမ်းခြေများ
2.3 Jara ကမ်းခြေ
3 ပလာဇာ del Cabildo
4 Bonanza စျေးကွက်
6 Sanlúcarအတွက် Flamenco
6.1 Sanlúcar de Barrameda တွင်မီးပြပွဲကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
6.1.2 Flamenco ကလပ် Puerto Lucero
6.1.3 Rociera အယ်လ် Rengue အခန်း
7.1.1 Bodegas Hidalgo, La Gitana
7.1.2 Bodegas, La Cigarrera
8 Sanlúcar de Barrameda တွင်ဘယ်မှာစားရမည်နည်း
8.1 Casa Bigote စားသောက်ဆိုင်
8.2 ဘား Casa Balbino
8.3 Betic ထောင့်
Barrio Alto သို့သွားရောက်ပါ
Barrio Alto de Sanlúcarသည်မြို့၏ရှေးအကျဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်၊ အလယ်ခေတ်တွင်၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုအာရုံစိုက်ပြီးနံရံတစ်ခုဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ လမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလခရီးစဉ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဗျူဟာမြောက်အချက်အနေနှင့်ကမ်းရိုးတန်းမြို့၏အရေးပါမှုကိုလေ့လာရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နန်းတော်များ၏ထောင့်တိုင်းတွင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်။ Bairro Alto ကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်ရာတွင်မည်သည့်အရာများကိုရပ်တန့်ရမည်ကိုသင့်အားငါပြမည်။
Palacio de Medina Sidonia ဘေးတွင်ရှိသော Cuesta de Belénတွင်တည်ရှိပြီး Las Covachas သို့မဟုတ် Tiendas de Sierpes တို့သည် ဟောင်းကုန်သည်စျေးကွက်။ သိသာထင်ရှားသော Gothic ပုံစံဖြင့်သူတို့ကို ၁၅ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် Medina Sidonia II Duke, Enrique Pérez de Guzmán y Meneses ကထိုအချိန်ကလမ်းများပေါ်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Sanlúcar၏စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုစုစည်းပေးခဲ့သည်။ ဒီအဆောက်အ ဦး ကကျယ်ပြန့်သောမုတ်များပြတင်းပေါက်များနှင့်နဂါးများကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသောလှပသောရေခဲသေတ္တာကိုအာရုံစိုက်စေသည်။
La Merced ၏ခနျး
၎င်းကို ၁၇ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ၎င်းကိုခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရသေ့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြို့၏သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကဲ့သို့ပင် La Merced ၏ခန်းမသည်လည်းဖြစ်သည် ၎င်းကိုမက်ဒီနာဆိဒိုးနီးယား၏မြင့်မြတ်သောအိမ်၏ထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းဟောင်းသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မက်ဒီနာစီဒိုးနီးယားမှ XXI Duchess သည်Sanlúcar City Council နှင့် the space ကိုလှူဒါန်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် လက်ရှိတွင်မြို့တော်ကောင်စီ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏မြူနီစီပယ်ခန်းမနှင့်ဌာနချုပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်သည် နှင့်Sanlúcarအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂီတပွဲတော်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နတ်သမီး၏ Basilica ကို VII Madina Sidonia မှတည်ဆောက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ၁၆၀၉ ကနေ ၁၆၁၃ အထိဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီဘုရားကျောင်းကိုမြတ်သောအိမ်ကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများကထိန်းချုပ်ထားတယ်။
ထိုကော်မရှင်သည်သန့်ရှင်းရာဌာနအားထင်ရှားသောထုံးစံအရလက်ဆောင်ပေးခဲ့သော Casa de Medina Sidonia ၏အကြီးတန်းဗိသုကာ Alonso de Vandelvira အားအပ်နှင်းထားသည်။ ချာ့ချ်၏မျက်နှာစာသည်သမ္မာသတိ ရှိ၍ အပြင်ဘက်သရဖူဆောင်းသောလှပသောခေါင်းလောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် အတွင်းပိုင်းတွင်ပြားချပ်ချပ်နီးပါးရှိသောအမိုးခုံးသည်အလင်းကိုထိပ်ရှိအပေါက်တစ်ခုမှ ဖြတ်၍ ဖြတ်သွားစေပြီးအဓိကယဇ်ပလ္လင်ကိုထွန်းလင်းစေသည်။
Rota ၏တံခါး ဒါကြောင့်အဟောင်းကိုမြို့တံခါးဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်Guzmán el Bueno ကဝိုင်းရံ။ ယင်း၏အမည်ကိုကြွေးတင်နေသည် ထိုနံရံပေါ်ရှိSanlúcar de Barrameda နှင့် Rot နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းသည်တစ် ဦး, အိမ်နီးချင်းရွာ။ Sanlúcarတွင်၎င်းကိုလူသိများသည် "ဒီ Arquillo" နှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေး XNUMX ကနေ XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။
အို၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏စီရင်စုနယ် ၎င်းသည်Sanlúcar de Barrameda ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကို ၁၆၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပြီးGuzmán el Bueno ၏မြေးဖြစ်သူ Isin de la Cerda y Guzmán၏ Medinaceli ၏ပထမဆုံး Duchess ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Mudejar စတိုင်နှင့်စတုဂံစက်ရုံ၏ပုံသဏ္ဌာန်အရဗိမ္မာန်တော်သည်Guzmánနှင့် de la Cerda တို့၏မြင့်မြတ်သောအိမ်များ၏မြင့်မြတ်သောအင်္ကျီများဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည့်သဲကျောက်ကျောက်တုံးမျက်နှာပြင်ကိုထင်ရှားစေသည်။ အတွင်းပိုင်း အဆိုပါ Mudejar coffered မျက်နှာကျက်အားလုံးမျက်စိဖမ်းမိ။
မက်ဒီနာ Sidonia နန်းတော်
မက်ဒီနာစီဒိုးနီးယားမှူး၏နန်းတော် ၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင် ၁၂ ရာစုမွတ်စ်လင်မ်လူမျိုးများအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာစတိုင်များနန်းတော်၌အတူတကွ, Mudejar စတိုင်ဟောင်းဆောက်လုပ်မှုနှင့် Renaissance ကိုလွှမ်းမိုးသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုမြင့်မြတ်သောအိမ်မှရရှိသောအနုပညာလက်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Zurbaránနှင့် Francisco de Goya တို့၏အနုပညာရှင်များ၏ပန်းချီကားများသည်ထင်ရှားသည်။ ဥယျာဉ်သည်သစ်တော 5000 မီတာရှိသည်2 ပြီးတော့အဆောက်အ ဦး ရဲ့ရတနာတွေထဲကတစ်ခုပါ။
ယနေ့တွင်နန်းတော်သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းFundación Casa Medina Sidonia ၏ဌာနချုပ်ဖြစ်သည် Sanlúcar de Barrameda ရှိအသိအမှတ်ပြုမှုအရှိဆုံးနှင့်စစ်မှန်သောဘော်ဒါဆောင်တစ်ခန်း၏နေရာဖြစ်သည်။
နန်းတော်ကို ၁၉ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Montpensier ၏ Duke ၏နွေရာသီနေထိုင်မှု, Antonio de Orleans နှင့်María Luisa Fernanda de Borbón။ ဒီနေ့က မြို့၏အထင်ရှားဆုံးအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်Sanlúcar de Barrameda ၏စီးတီးကောင်စီအနေနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်း၏ဗိသုကာစတိုင်နှင့်လှပသောဥယျာဉ်များကလုပ်ပါ ထူးခြားတဲ့အနုပညာလက်ရာ၊ အဆိုပါ Neo-Mudejar စတိုင်မျက်နှာစာအတွင်းပိုင်းအချို့ဒေသများရှိပစ္စုပ္ပန်အီတလီဂန္ထဝင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်။ ရာကိုကို၊ အီဂျစ်သို့မဟုတ်တရုတ်စတိုင်များကိုနန်းတော်ရှိအခြားခန်းများ၌တွေ့ရသည်။
၁၆ ရာစုတွင် Casa de Medina Sidonia ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Castillo De Santiago သည် Gothic နှောင်းပိုင်းပုံစံနှင့် Tarifa ရဲတိုက်မှ Torre de Guzmán el Bueno ၏ပုံတူကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည်။ ဒီအဆောက်အအုံဟာ ducal ခံတပ်တစ်ခုအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ပြီး Colon, Fernando de Magallanes နဲ့ Isabel la Católicaတို့လိုနေရာမျိုးကြောင့်Sanlúcarမှာရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီကိုလာလည်ပတ်ခဲ့တယ်။
Castillo De Santiago သည်မြို့တော်၌သင်တွေ့မြင်ရမည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ လောလောဆယ် အတွင်းပိုင်းအိမ်များ ဝတ်စုံပြတိုက်နှင့်လက်နက်ပြတိုက်, နှစ် ဦး စလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ခံတပ်မှအထွေထွေဝန်ခံချက်လက်မှတ်နှင့်အတူပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဥယျာဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်ပွဲများစွာကျင်းပရန်ကမ်းလှမ်းထားသောအခန်းများရှိသည်။
Sanlúcar de Barrameda ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ
Sanlúcarသည်အစီအစဉ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုပေးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးကမ်းရိုးတန်းဒေသဖြစ်သော်လည်းဆောင်းရာသီတွင်ပင်လည်ပတ်သင့်သည်။ သို့သော် နွေရာသီမှာမြို့ကိုသွားပြီးတောင်ပိုင်းအပူကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်Sanlúcar de Barrameda ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေကိုသွားနိုင်ပါတယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေချိုးခြင်းဖြင့်အေးမြစေသည်။
Guadalquivir ၏ပါးစပ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းကမ်းခြေသည်ဒေသခံများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားပြီးအပြင်လူတို့မကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိသည်။ ဟုတ်တယ် ကြည်လင်သောသဲနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောရေများရှိသည့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောကမ်းခြေဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေအနီးတွင်ဒေသခံတံငါသည်များပိုင်လှေငယ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရေချိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောကမ်းခြေမဟုတ်သော်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေဘားတွင်သောက်ခြင်းနှင့်ပင်လယ်လေပြင်းမွေ့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
La Calzada နှင့် Las Piletas ကမ်းခြေများ
ဤကမ်းခြေများ၏အလုပ်အကိုင်ပမာဏသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသော်လည်းအထူးသဖြင့်၎င်းတို့ကိုသွားသင့်သည် သငျသညျအဆောက်အ ဦ များနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများအမျိုးမျိုးတို့ကိုအားသာချက်ယူလိုလျှင်သငျသညျရှုခင်း၌မွေ့လျော်နေစဉ်။
သငျသညျမွို့၏ပုပ်ရဟန်းမင်းများနှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားခြင်းမှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ပိုမိုနစ်မြုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တစ်နေကုန်နေရန်ကြိုးစားနေပါက Playa de la Jara သည်သင့်ကိုစိတ်စွဲမှတ်သွားလိမ့်မည်။ Sanlúcar de Barrameda ၏ဗဟိုနှင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ဤကမ်းခြေသည်ရေကောင်းရေလျှံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သဘာဝတရားနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာမရှိသော်လည်းရှုခင်း၏လှပမှုသည်ထိုနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တော့ငြိမ်သက်မှုကိုအာမခံပါတယ် နှင့်သဲပေါ်မှာနေဝင်ချိန်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်အမှန်တကယ်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဒီကမ်းခြေကိုသွားရင်ဖိနပ်စီးဖို့သင့်ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျောက်တုံးတွေရှိတယ်။ ဒီဖိနပ်ကသင့်ရေချိုးခန်းကိုမပျက်စီးစေအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ပလာဇာ del Cabildo
Plaza del Cabildo သည်Sanlúcar de Barrameda ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိဘားများ၊ လှေကားထစ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုဖြန့်ဝေပြီးလေထု၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုစုစည်းထားသည်။ ဗဟိုစမ်းရေတွင်းနှင့်စတုရန်းပေအတွင်းရှိကြီးထွားသောစွန်ပလွံပင်များသည်၎င်းကိုထူးခြားသည့်နေရာဖြစ်စေပြီးareaရိယာ၏အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါဟာဘဝနှင့်ပြည့်ဝ၏ Tapas ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုသင်သိလိုပါကဤနေရာသည်ပြုလုပ်ရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိုသောသွားနှင့်အတူသူတို့သည်လည်းသူတို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စတုရန်းဝန်းကျင်ဒေသခံများအကြား Sanlúcar de Barrameda တွင်အကောင်းဆုံးရေခဲမုန့်ဆိုင်အချို့ရှိသည်။
အခြားသောကမ်းရိုးတန်းမြို့များကဲ့သို့ ငါးဖမ်းခြင်းသည်Sanlúcar de Barrameda တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့်အကျဆုံးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါးကုန်သွယ်မှုကိုသိရှိခြင်းသည် Sanlucan ယဉ်ကျေးမှုကိုစုပ်ယူရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြောင်းသွားဖို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘာမျှမသည် Bonanza စျေးကွက်။
ဆိပ်ကမ်းဘေးတွင်တည်ရှိသောငါးစျေးသည်မြို့၏ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနယ်မြေ (၂) ခုခွဲခြားထားသည်။ တစ်ခုမှာပိုက်ကွန် - ငါးမျှားရန်နှင့်နောက်တစ်ခုမှာလှော်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါးလေလံသည်Sanlúcarသို့သင်အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းသက်သေခံနိုင်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်ငါးသစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အကောင်းဆုံးလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများကိုလေလံဆွဲသည့်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ကြသည်။ သင်မြို့၏အနှစ်သာရကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုပါကလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည် ငါးချောင်းကြည့်ဖို့အထိုင်ကိုချဉ်းကပ်။
Doñanaအမျိုးသားဥယျာဉ် ၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်အရေးအပါဆုံးအကာအကွယ်ပေးထားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအရံသည်ဂေဟစနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်ကြွယ်ဝသောရှုခင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဥရောပတွင်ထူးခြားသည်။ Sanlúcar de Barrameda သည်ပန်းခြံနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးအလွန်ကံကောင်းသည် Doñanaသို့အလည်အပတ်ခရီးကိုမြို့မှစီစဉ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများထက်ပိုမိုသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်ရှာဖွေနေပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်အများဆုံးဖြစ်သောသဘာဝကိုခံစားလိုပါကဤလေ့လာရေးခရီးများထဲမှတစ်ခုကိုကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါပန်းခြံကို Guadalquivir မှတဆင့်လှေဖြင့်ဝင်ရောက်သည် မြစ်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အံ့ already ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းဒေါန်နာ၏ဂေဟစနစ်အားလုံးကိုသိလိုပါကအထူးပြုလမ်းညွှန်ပါ ၀ င်သောမြေမျက်နှာသွင်ပြင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလည်းသင်ငှားရမ်းနိုင်သည်။ သဘာဝရတနာ။
စက်လှေများသည် Bajo de Guíaကမ်းခြေမှထွက်ခွာ။ ဂူဒက်ဘယ်လ်ဗစ်ကို ဖြတ်၍ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး၏ကမ်းခြေသို့ပို့သည်။ ပြီးတာနဲ့ sမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကားကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ပြီးDoñana၏အထင်ရှားဆုံးရှုခင်းများကိုခရီးဆက်ပါကမ်းခြေများ၊ အဖြူရောင်သဲခုံများ၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများ၊ လမ်းကြောင်းက La Plancha အဆုံးသတ်တစ်ချိန်ကပန်းခြံတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသောမြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လှေကမင်းကိုSanlúcarကိုကျောခိုင်းသွားမှာပါ။ ဒါဆိုမင်းကမြို့ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ယခုသင်သိပြီ၊ Sanlúcar de Barrameda တွင်ဘာကိုမြင်ရမည်ကိုမသိလျှင်၊ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ၎င်းင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရန်နှင့် သင်ဒီလေ့လာရေးခရီးကိုတစ်ရက်တည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်
Flamenco သည် Andalusia ၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီဂီတအမျိုးအစားကိုချစ်မြတ်နိုးမှုကနေရာတိုင်းမှာရှူရှိုက်ရတဲ့မြို့ကြီးတွေပါSanlúcar de Barrameda သည်ထိုမြို့များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်ခြင်းကိုခံစားရန်၊ Sanlúcarတွင်ထိုနယ်မြေများ၏အနုပညာကိုထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းအတွက်အထူးပြုဒေသခံများရှိသည်။ သင်Sanlúcar၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံလိုပါကဤပြပွဲမျိုးကိုပြသသည့်peñasများနှင့်သက်တမ်းများ (သို့နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များထပ်မံပေးအပ်သော) များသို့မသွားဘဲသင်မထွက်ခွာနိုင်ပါ။
Sanlúcar de Barrameda တွင်မီးပြပွဲကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
ဤသည် Orleans နန်းတော်မှသုံးမိနစ်လမ်းလျှောက်ရုံ Calle San Miguel အပေါ်တည်ရှိပြီး, ဒီ ရိုးရာ Tavern နှင့် Tablao ရောနှော ခရီးသွား by ည့်သည်မှပြုလုပ်သောထူးခြားသောမီးအလင်းရောင်ပြပွဲကိုခံစားခွင့်ရရှိစေသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်တွေ, ထိုဒေသ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများမြည်းစမ်းနေစဉ်။
Flamenco ကလပ် Puerto Lucero
Calle de la Zorra ပေါ်ရှိ Castillo De Santiago မှမီတာ ၃၀၀ အကွာPeña Flamenca Puerto Lucero ဖြစ်သည်။ ဒီအမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ Flamenco ရှိုးပွဲများကိုစည်းရုံး။ theရိယာမှအနုပညာရှင်များအတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ငယ်ရွယ်သောစွမ်းရည်များကိုကူညီခြင်း၊ peñaသည် flamenco သည်Sanlúcar၏သက်ရှိအမွေအနှစ်ဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ကြိုးစားသည် ပြီးတော့သူတို့ကဒီအနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့မသမာမှုတွေကိုလာတဲ့သူတွေကိုပြသဖို့ကြိုးစားကြတယ်။
Rociera အယ်လ် Rengue အခန်း
Tapas, အချိုရည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတဖြစ်သော Sala Rociera El Rengue သည်Sanlúcarတွင်ပျော်စရာအလိုရှိသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် Barrameda မှ rumbas နှင့် sevillanas တို့၏စည်းချက်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ Calle de las Cruces တွင်တည်ရှိပြီးထိုနေရာသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးသင်က Flamenco နှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုသည်သမိုင်းကြောင်းအရSanlúcar de Barrameda အတွက်အရေးပါသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမူရင်းဂိုဏ်းဂဏများမှဝိုင်ကိုရောင်းသည့်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများရှိသော်လည်း (Jerez, Vinagre နှင့် Brandy de Jerez), Manzanilla သည်Sanlúcarယဉ်ကျေးမှုနှင့်အစဉ်အဆက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
Es ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအထူးဝိုင်တွေထဲကတစ်ခု ၎င်းသည်ထူးခြားသောလက္ခဏာရှိပြီး၎င်းသည်မွေးဖွားရာဒေသဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ် အသီးဖျော်ရည်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်, ၎င်းသည်အအေးစားခြင်း (၅º နှင့် ၇ ံစင်တီဂရိတ်ကြား) နှင့်ပင်လယ်မှလာသည့်အစားအစာများအားလုံးနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့Sanlúcarသည်အလွန်ကောင်းသောကုန်ကြမ်း၊ လတ်ဆတ်သောနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။
Chamomile ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဘယ်လိုရလဲဆိုတာသင်မသိချင်ဘူးလား။ ဝိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်မြို့တော်သို့ရက်အနည်းငယ်နေထိုင်ရန်လာရောက်လည်ပတ်ကြသောဝိုင်ချစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလာရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်သည့်စက်ရုံများရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြလိမ့်မည် Sanlúcar၏သင်္ကေတဖြစ်လာသည်သောသောက်၏။
1972 တွင်တည်ထောင်သည် Bodegas Hidalgo La Gitana သည်ရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Sanlúcar de Barrameda တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သော La La Gitana Manzanilla သည်၎င်းတို့၏ကျော်ကြားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
Organize နေ့စဉ်အရသာ နှင့်လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်အမျိုးမျိုး။ ကြိုတင်မှာယူမှုများသည်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပြုလုပ်နိုင်သည် နှင့်စျေးနှုန်းများအတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြသည်။
Bodegas, La Cigarrera
Manzanilla အကြောင်းကို La La Cigarrera အကြောင်းပြောခြင်းသည်အစဉ်အလာနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏မူလအစသည်စန်ကာကာတွင်မစ္စတာဂျိုးဇက်ColómDarbóနှင့် ၁၇၅၈ ခုနှစ်တွင်Callejón del Truco ရှိဒေသခံတစ် ဦး တွင်ဝိုင်သိုလှောင်ရုံကိုတည်ထောင်ခဲ့သူကာတာလန်းကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပြီးနောက်ယနေ့ စီးပွားရေးသည် La Cigarrera ကိုစီးပွားဖြစ်အရှိဆုံး Manzanillas တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ La Manzanilla ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုပြည်သူလူထုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်နှင့်ရိုးရာနှင့် Sanlucan သမိုင်းကိုချစ်မြတ်နိုးရန်အတွက်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည်အများပြည်သူသို့ဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အဆောက်အ ဦ ၏ ided ည့်လမ်းညွှန်များ နှင့်အထဲတွင်ပါဝင်သည် သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဝိုင်အရသာ. သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သူတို့ဆက်သွယ်သည့်အဆက်အသွယ်မှကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။
၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Bodegas Barbadillo သည်အဆောက်အအုံများနှင့်မြည်းစမ်းမှုများကိုလမ်းညွှန်ပေးသောခရီးစဉ်သာမကဘဲ သူတို့မှာSanlúcarရှိ Manzanilla ၏သမိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုရည်ညွှန်းသောပြတိုက်ရှိသည်။ စည်များကြားတွင်သူတို့သည်သင့်အားသူတို့၏ဘဝလမ်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသလိမ့်မည်။ သင့်အားထိုဒေသ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုထူးခြားသောနည်းဖြင့်ပိုမိုနီးကပ်စေလိမ့်မည်။
La Manzanilla Solear သည်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏လူသိအများဆုံးဝိုင်ဖြစ်သည် ၎င်းသည်ရိုးရာ Andalusian ပြပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းအများအပြားကိုဆေးထည့်ခြင်းနှင့်ကာတွန်းကားခြင်းတို့ကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
Sanlúcar de Barrameda တွင်ဘယ်မှာစားရမည်နည်း
Gastronomy သည်ထိုဒေသရှိခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Sanlúcarသည်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်လူသိများသည် ပုစွန်က၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်။ ငါးအတွက်အရသာ၊ ကောင်းမွန်သောကြော်ကြော်ခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်စပျစ်ရည်နှင့်တွဲဖက်သောပင်လယ်စာများသည်Sanlúcar gastronomy သည်ကာဒစ်၏အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာကိုကိုယ်စားပြုစေသည်။
Sanlúcar de Barrameda ၏ကောင်းမွန်သောအစားအစာကိုမစားဘဲမထွက်ခွာစေရန်အချို့ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တင်ပြသည် မွို့၌အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ။
Casa Bigote စားသောက်ဆိုင်
Bajo de Guíaတွင်တည်ရှိပြီး ဒီစားသောက်ဆိုင်ကို ၁၉၅၁ ခုနှစ်ကတည်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးရိုးရာအစဉ်အလာနှင့်အထင်ကရအမှတ်အသားဖြစ်သောနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ gastronomic ကမ်းလှမ်းမှုသည်ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ပင်လယ်စာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလတ်ဆတ်သောငါးများ၊ ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ထားသည့်အပြင်ထူးခြားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြေခံသည်။
ဘား Casa Balbino
ကုန်စုံစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်အဖြစ်စတင်ခဲ့ရာသည်ယနေ့Sanlúcar de Barrameda ရှိရည်ညွှန်းဘားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏မီးဖိုချောင်တွင်ပြင်ဆင်ထားသောပုစွန်မွေးမြူသူများသည်ဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအနိုင်ယူသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုရိုသေလေးစားခြင်းနှင့်typicalရိယာ၏ပုံမှန်အစားအစာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော gastronomic ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုထောက်ကူသောတိုင်များဖြစ်သည်။
သငျသညျစစ်မှန်ကိုချစ်သူတို့တွင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်, ဤအရပ်ဌာနကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့်ဗဟိုမှတိတ်ဆိတ်ခြင်းမှဝေးကွာသောဤသက်သေမပေါ်သည်ဒေသခံများသွားလေ့ရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်အရRincónBéticoကမြို့မှာအကောင်းဆုံးကြော်ငါးတွေကိုလတ်ဆတ်တဲ့၊ ကြော်ထားသောထမင်းတစ်မျိုးလုံးသည်၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ပန်းကန်ဖြစ်ပြီးအခြားနေရာများတွင်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » Sanlúcar de Barrameda မှာဘာကြည့်ရမလဲ
အဲဂုတ်တုပွညျ၌ Luxor ၏ဗိမာနျတျော
Marquesas ကျွန်းများ, ပရဒိသု